Olee otú Ịmata Ọdịiche Apple dị iche iche ụdị nke iPhone na iPad
> Resource> égwu> Olee otú iji Ịmata Ọdịiche dị iche iche ụdị nke iPhone na iPad
iPhone, iPad bụ kasị ukwuu Apple na ngwaahịa, na ha na n'ezie gbanwere ụwa na ụfọdụ nnukwu ụzọ. Na ha pụrụ iche na ulo oru imewe, na ha na ọrụ nkà na onye ọ bụla ga-adị njikere nwere. Ma, otu ihe na-enweghị nsogbu bụ na ha na anya nke ukwuu myiri na anyị nwere ike na o siri ike ịgwa ihe iPhone ma ọ bụ ihe iPad anyị nwere. Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iphone Data Recovery) ama akwado ezinụlọ ahụ dum nke iPhone , iPad na iPod aka, na ọ bụ ọrụ dịịrị anyị na-agwa ọdịiche dị n'etiti ndị dị iche iche ụdị nke iPhone na iPod aka.
Part 1. Olee otú iji Ịmata Ọdịiche iPhone 4S si iPhone 4
Part 2. Olee otú iji Gwa ọdịiche dị n'etiti ndị iPhone 4 (GSM) na iPhone 4 (CDMA)
Part 3. iPad 2 vs. Ọhụrụ iPad (iPad 3) vs. iPad na Retina ngosi (iPad 4)
Siri maka iPhone 4S
The mfe ụzọ na-agwa iPhone 4 si iPhone 4S bụ na iPhone 4S nwere ọrụ nke Siri, mgbe iPhone 4 adịghị. Ya mere, biko ego gị iPhone maka Siri mbụ, ọ bụrụ na ị na-amaghị ma ọ bụrụ na ọ bụ iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 4S. E wezụga, ekele ya ọhụrụ A5 mgbawa, iPhone 4S dị otú ahụ snappier na ngwa ngwa.
The iPhone 4 GSM ga na-a SIM kaadị tree. Kaadị SIM tree-emi odude ke n'akụkụ aka nri nke ufọt ufọt eku. Na ee, e nwere nwa akara nso na ala, ma ọ bụ dị ka na ihe nile nke iPhones.
Otu nta mgbanwe ke imewe ga-ọnyịnye nke buttons on ekpe spain. Dị ka hụrụ na foto a tụnyere, na iPhone 4S 'ogbi bọtịnụ na igodo olu na-akpọlite ​​dị nnọọ ntakịrị bit. Ọ bụ nnọọ a nkeji dị iche. Otú ọ dị, na-echebe ikpe na nwere ndị a kpọmkwem button oghere maka iPhone 4 nwere ike abụchaghị ndị ọhụrụ version.
Mgbe e nwere ndị mba nnukwu iche n'etiti ngwaọrụ abụọ. The diffences nke ngwaike ka ọwọrọiso ka ị pụrụ ịhụ na-esonụ oyiyi.
Ugbu a Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows & Mac) na-akwado ma iPhone 4 (GSM) na iPhone 4 (CDMA)
Nza nke ndị ịjụ ihe mere Wondershare Dr.Fone anaghị akwado ha iPhones, na ha na-eji iPhone 4, ọ bụghị iPhone 4S. Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) akwado iPhone 4, adịghị ya? Azịza ya bụ ee. N'oge gara aga Dr.Fone naanị akwado iPhone 4 GSM, ma ugbu a Wondershare Dr.Fone akwado ma iPhone 4 GSM na iPhone 4 CDMA. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ka chọrọ ego gị iPhone ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe iPhone 4 GSM ma ọ bụ onye iPhone 4 CDMA. Ị nwere ike ịlele ya dị ka Atụmatụ n'okpuru.
Olee otú m na-agwa ihe dị iche n'etiti onye iPhone 4 GSM na iPhone 4 CDMA?
E nwere ihe abụọ doro anya ọdịiche dị n'etiti iPhone 4 GSM na iPhone 4 CDMA. Otu bụ na kaadị SIM tree na ndị ọzọ bụ banyere nwa akara na iPhone ahu.
Lee na metal ufọt ufọt eku. Enwere nwa akara n'elu olu & ogbi buttons? Ugbu a, bụ n'ebe a na kaadị SIM tree n'akụkụ aka nri nke ufọt ufọt etiti? Bụ ihe ndị a anya n'ihi na.
Ezie na ọ dịghị SIM kaadị tree na iPhone 4 CDMA, na ị ga-achọpụta na ihe nlereanya a e nwere 2 nwa edoghi emi odude ke n'elu nke ufọt ufọt etiti na abụọ ahụ ekpe na nri n'akụkụ, nke dị iche iche site iPhone 4 GSM.
Ihe banyere iPhone 4 GSM na iPhone CDMA
iPhone 4 GSM - The iPhone 4 GSM version na-awa site na-ebu uwa dum. Carriers na-enye ndị na iPhone 4 GSM nlereanya na-agụnye AT & T, Rogers, Vodafone, na T-mobile.
iPhone 4 CDMA - The iPhone 4 CDMA mbụ e wepụtara site Verizon na e mesịrị awa site Sprint tupu ntọhapụ nke ndị iPhone 4S. Ma Verizon & Sprint ka na-enye ndị iPhone 4 CDMA nlereanya.
Ọ bụ nnọọ mfe ịgwa iPad 1 na iPad Obere si ọdịdị, mgbe n'ihi na ndị ọzọ iPad ụdị, ọ bụghị otú ahụ mfe ka iche ha. Ebe a, ka òkè ụfọdụ Atụmatụ enyere gị aka ọdịiche dị iPad 2, ọhụrụ iPad na iPad na Retina ngosi.
Otú ịgwa iPad na Retina ngosi (iPad 4) si ọhụrụ iPad (iPad 3) & iPad 2
1. Siri: nání tinyere iPad na Retina ngosi
Na iPad ezinụlọ, naanị iPad Obere na iPad na Retina ngosi nwere Siri, nke na i nwere ike iji olu gị ka izipu ozi, set ncheta, na ndị ọzọ. iPad 2 na ọhụrụ iPad? E nwere abụghị. Ya mere, ịmata ihe dị iche gị iPad na Retina ngosi si iPad 2 na ọhụrụ iPad, nke a bụ ihe kasị mma na kacha ụzọ.
2. Njikọta: a pụrụ iche otu maka iPad na Retina ngosi
Site njikọta ma ọ bụ njikọ ọdụ ụgbọ mmiri, ọ bụ dịkwa nnọọ mfe ịmata ọdịiche iPad na Retina ngosi si iPad 2 na ọhụrụ iPad. Lelee dị iche dị ka oyiyi e gosiri n'okpuru.
Otú ịgwa iPad 2 si ọhụrụ iPad (iPad 3)
1. ese foto dị iche iche na size
A bụ ihe ọzọ nnukwu nweta nkwalite maka iPad 3 (ọhụrụ iPad). The ese foto na iPad 2 ndị dị nnọọ sonso e, mgbe iSight igwefoto na 2012 nlereanya bụ nnọọ mma. Site size nke ese foto, ị nwere ike mfe ịgwa gị iPad 2 si ọhụrụ iPad. Hà na a Vernier caliper, igwefoto dayameta nke iPad 2 bụ 5.5mm, mgbe ọhụrụ iPad si bụ 6.9mm. E nwere ọdịiche dị nke 1.4mm n'obosara. Dị nnọọ ego ihe dị iche na-esonụ na foto a.
2. Voice okpukpo (Ọ bụghị Siri)
Voice okpukpo, obere nwanne Siri bụ ọhụrụ bọtịnụ na keyboard ohere maka olu okpukpo. Ọ nwere ike na-asụgharị ihe ị na-ekwu n'ime okwu. Ịmata ọdịiche ọhụrụ gị iPad si iPad 2, dị nnọọ ego ya na keyboard. Ọ bụrụ na ị pụrụ ịhụ ya, ọ bụ ihe ọhụrụ iPad (iPad 3) n'aka gị ugbu a.
Ịmata Ọdịiche Dị Iche Iche iPad Ịdị si Model Number
Dị iche iche ụdị nke iPad nwere dị iche iche nlereanya na ọnụ ọgụgụ, ndị na-esonụ bụ kpọmkwem nlereanya na ọnụ ọgụgụ nke iPad usoro. Ị nwere ike ịlele nlereanya nọmba si azụ nke iPad.
1 The nlereanya na ọnụ ọgụgụ nke mbụ iPad (iPad 1) A1219 na A1337.
2 Ihe nlereanya nọmba nke iPad 2 bụ A1395, A1396, na A1397.
3 The nlereanya na ọnụ ọgụgụ nke The ọhụrụ iPad (iPad 3) bụ A1416, A1403 na A1430.
4 The nlereanya na ọnụ ọgụgụ nke iPad na Retina Ngosipụta (iPad 4) bụ A1458, A1459 na A 1460.
Olee otú Naghachi ehichapụ iPad foto, ndetu, Videos, ana-akpo & Kalinda
Olee otú Download Wondershare MobileGo App-ejighi eriri